Somalia:Warka Dagaalada Koonfurta Soomaaliya | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > WARARKA	> Somalia:Warka Dagaalada Koonfurta Soomaaliya
War ka kusaabsan dagaalada ka socda Koonfurta Soomaaliya gaar ahaan dagaalo ka dhacay Ceelcadde oo ka tirsan Gobolka Gedo,dagaalo ka dhacay meel udhaw Qooqaani ee Gobolka J/Hoose iyo qarax ka dhacay Baledweyne ayaa waxaa ka waramay wariye BBC da uga soo warama Muqdisho Mr. Dhoore sida laga sii daayay Idaacadda.
Warka dagaalada isagoo ka warbixinaya wariyuhu wuxuu sheegay sida soosocota:
“Dagaal xoog leh oo socday muddo 4 saacadood oo xiriir ah ayaa shalay galinkii dambe ka dhacay deegaanka Ceelcadde ee Gobolka Gedo.
Dagaalkan ayaa dhexmaray ciidamada Dawladda Kenya oo ay kaabayaan ciidamo katirsan dawladda Soomaaliya,waxaana dagaalkaasi soo gaaray shalay maqribkii.
Afhayeen u hadlay xarakada shabaab mujaahidiin ayaa sheegay in dagaalkaasi ay ku gubeen laba baabuur oo kuwa dagaalka ah isla markaana ay qasaare ugeysteen ciidamada isbahaysiga ee weerarka soo qaaday.
Hase ahaatee,Xildhibaan maxamuud Shiikh Aadan oo ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya kuna sugan Gobolka Gedo ayaa sheegay in ciidamada isgarabsanaya ay la wareegeen dhul muhiim ah oo shabaabku ay horay ujoogeen.
Dagaalo kale ayaa ka dhacay meel udhaw deegaanka Qooqaani ee Gobolka J/Hoose,kaasoo la sheegay inay kulug lahaayeen ciidamada Kenya iyo kuwa dawladda Soomaaliya dagaalkan ayaa yimid kadib markii kolonyo ciidamadaa kamid ah ay wadada ugaleen xarakada shabaab.
Waxaa adag in la ogaado xadka rasmiga ah qasaaraha ay geysteen dagaalada shalay ka dhacay qaybo kamid ah gobolada Soomaaliya ee dhexmaray ciidamada Dawladda Kenya,kuwa Soomaaliya iyo sidoo kale ciidanka xarakada shabaab.
Maalmihii udambeeyay dhaqdhaqaaq ciidan oo xoog leh ayaa ka socday gobolada Koonfurta,halkaas oo ciidamo badan oo katirsan kuwa Kenya iyo kuwa Soomaaliya ay kusugan yihiin.
Sidoo kale dhaqdhaqaaq ciidan oo xoogleh ayaa laga soo sheegayaa qaybo kamid ah Gobolka Hiiraan oo ciidamada Itoobiya dhawaan ay soo galeen kuwaas oo la wareegay magaalada Baledweyne.
Sidoo kale qarax miino ayaa kadhacay magaalada Baledweyne shalay galinkii dambe gaar ahaan nawaaxiga buundada halkaas oo ay marayeen kolonyo ka tirsan ciidamada Itoobiya.”
2 Britons sentenced for racist murder Libya War 2011 – Video showing the capture of Muatasem Gaddafi “unconscious” !!